Kooxda Liverpool oo aan waligeed dib ugu soo laaban doonin xiisaha Philippe Coutinho! – Gool FM
(Liverpool) 20 Agoosto 2019. Kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa la soo warinayaa inaysan waligeed dib ugu soo laaban doonin la soo wareegista laacibkoodii hore ee khadka dhexe, Philippe Coutinho.
Reds ayaan qorsheynaynin markale inay dib ugu soo celiso xiddigan reer Brazil horyaalka Premier League, kaddib markii ay xagaagan ku guuldarreysteen inay kala soo wareegaan Barcelona.
27-sano jirkaan ayaa shalay hal xilli ciyaareed oo amaah ah ugu biiray Naadiga Bayern Munich, heshiiskaas uu ku dhaqaaqay ayaana ka dhigaya in kooxda reer Jarmal ay bixiso 8 milyan oo gini, isla markaana ay daboosho oo ay bixiso mushaarka todobaadlaha ah ee uu qaato kaasoo dhan 250,000 oo gini.
Kooxda Bayern Munich ayaana qiyaar loo siiyey sidoo kale inay ciyaaryahankan wada iibsan karto haddii uu qanciyo sanadka soo socda, iyagoo kula wareegi karta adduun dhan 110 milyan oo gini.
Dhowr kooxood oo kale ayaa la la xiriirinayay saxiixa xiddigan khadka dhexe xagaagan oo ay ku jiraan kooxda xafidanaysa horyaalka Faransiiska ee PSG iyo Reds lafteeda kaasoo Barcelona ugu biiray 148 milyan oo gini bishii Janaayo ee 2018.
Si kastaba ha ahaatee, Warsidaha The Athletic ayaa warinaya in kooxda uu hoggaamiyo tababare Jurgen Klopp aysan mardambe xiiseyn doonin inay xiddigan xulka qaranka Brazil dib ugu soo celiso garoonka Anfield, inta badan sababtu waxa ay quseysaa dhanka qiimaha.
Waxaa la rumeysan yahay in u dhaqaaqistii Coutinho ay ugu kici lahayd kooxda Liverpool ugu yaraan 21 milyan oo gini oo amaahda ah iyo mushaharkiisa, taasoo ah wax ay kooxdu u aragtay inaan loo baahnayn maadaama xiddigii hore ee kooxda Inter Milan aan loo dammaanad qaadi karin inuu si joogto ah ugu soo bilowdo safka hore ee Reds.